ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: "အဇာတသတ်လို မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ သို့ မိဘမေတ္တာ"
အဇာတသတ်သည် ခမည်းတော်ဗိမ္ဖိသာရမင်းအားဤသို့ထောင်ထွင်းချထား၏ သူ၏ အာဏာစည်းစိမ်လောဘဇောကြောင့် ခုတော့ ပိတုဃာတကကံကြောင့် ငရဲ သို့လားနေရှာပြီ
မြတ်ဗုဒ္ဒက “မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနံ ပုတ္တဒါရဿ သင်္ဂဟော” တဲ့ မိဘ နှစ်ပါးတို့အားပြုစု လုပ်ကျွေးခြင်းသည် မင်္ဂလာတပါး။” ဗြဟ္မာ တိ မာတာပိတရော ပုဗ္ဗစရိယာတိ ၀ုစ္စတေ”လို့လဲပြောထားတယ်ပေါ့။ လက်ဦးဆရာမည်ထိုက်စွာ ပုဗ္ဖာစရိယမိနှင့်ဖ.။ဒီလိုစားရတယ် ဒီလိုပြောရတယ် ရဟန်းသံဃာများတွေ့ရင်.ဦးတော်.လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သွန်သင်မှု ဖ၀ါးလက်နှစ်လုံး ပုခုံးလက်နှစ်သစ် လူဖြစ်လာအောင်ပြုစုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာခဲ့ကြသည်။ အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေးကို ကျေးဇူးတင်မိသလို စာရေးဆရာကိုလည်း လေးစားမိသည်။ စိတ်လေးရှုတ်လေတိုင်း ဒေါ်မာမာအေး ၏ သီချင်းကို ဖွင့်နားထောင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အမေ ကိုသတိရနေရရင် ရင်ထဲအေးမြစေခဲ့လို့။ ခုလည်း အမေ့ကို သတိရစေသည် သတိရလို့ ဒီအကြောင်းလေးရေးမိသည်။ (အရွယ်မတိုင်မီ….မိဘနှစ်ပါး…ပိုးမွေးသလို မွေးရပါအတည်..အနန္တဂုဏ်ရည် ပျိုကြည်အောင် ကျေးဇူးတွေ တင်သည်။ ဖ၀ါးလက်နှစ်လုံး..ပုခုံး လက်နှစ်သစ်..လူဖြစ်အောင်လဲ…ကျွေးမွေးရသည်.။လူလားမြောက်တဲ့အချိန်မှာအတည်.အထင်တော်များ မှားခဲ့သည်။ဥပမာ….အဇာတသတ်မင်းနဲ့….).စသည့် တေးသွားလေးကို ရင်ထဲမှာစွဲနစ်စေသည်။ အဇာတသတ်မင်းသားသည် လူပေါင်းမှားခဲ့၏။ မင်းစည်းစိမ် အာဏာကိုမက်မောသည့် လောဘဇော။ ဆရာမတင်သင့်သူ့ကို ဆရာတင်လိုက်သည့် အမှားတွေက သူ့နောက်သို့အရိပ်မဲသဏ္ဍာန် ထင်ဟပ်ပြီး ရာဇ၀င်တင်သွားခဲ့သည်။ အဇာတသတ်မင်းဟာ လူပေါင်းလဲမှား မင်းစည်းစိမ် တက်မက်မောခြင်းလောဘဇောကြောင့် ဖခင်ကြီးဗိမ္ဗိသာရမင်းကို ထောင်တွ င်းအကျဉ်းချ။ ဖ၀ါးကိုဒါးနဲ့ခွဲ ရှားမီးခဲကင်တယ်။ နောက်ဆုံး စာလေး၂ဆောင်ကို မူးကြီးမတ်ကြီးများက လာရောက်ဆက်သခဲ့သည်။ အမတ်ကြီး၂ ယောက်လမ်းမှာဆုံဖြစ်သည်။ တယောက်က မင်္ဂလာစာချွန်။တယောက်က အမင်္ဂလာစာ။ တယောက်နဲ့ တယောက်မေးဖြစ်ကြ၏။ အမင်္ဂလာစာချွန်တော်အမတ်ကြီးက မင်္ဂလာရှိသောစာချွန်လွှာစာကို အရင်ဆက်သစေ၏။ အဇာတသတ်မင်းသည် သားတော်လေးမွေးဖွားကြောင်း ကြားသိရသည့်နှင့် တပြိုင်နက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့သည်ကား မဖြစ်ဘူးသော ရင်ထဲမှပီတိတို့သည်ကား.ပြောမပြတတ်လောက်အောင်ဟု စာပေတို့ဆို၏။ အနီးနားတွင် မယ်တော် ဝေဒေဟီသည်ရှိ၏။ အဇာတသတ်မင်းသားသည် မယ်တော်အား သားကိုမွေးဖွားတုန်းက သားကို ဖခမည်းတော်က အဲလိုချစ်တာပဲလားတဲ့..။ ထိုအကွက်ကိုပြောချင်နေရှာသော ဝေဒေဟီမိဘုရားကြီးသည် မင်းလူမိုက်ပဲ. ဒီထက်တောင်ပိုတယ်။ မင်း ကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ချိန်မှာ အဖကိုသတ်မဲ့သားဟု ပု ဏ္ဏားတော်များ နိမိတ်ဖတ်၍ ငါ မဖွားနိုင်ကြောင်း အမျိုးမျိုးကြံစည်သော်လည်း မင်းကိုချစ်တဲ့ မင်းအဖေက သတ်လိုရင်သတ်ပါစေတဲ့။ သားတော်မျက်နှာလေးမြင်ပရစေဆိုပြီး မပြယ်သောမေတ္တာတွေနဲ့ချစ်ခဲ့သလို သားတော်လက်မှာ ခူနာပေါက်ပြန်တော့လဲ မအိပ်နိုင် မစားနိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဟာ အာခံတွင်းမှာငုံထားပြီး အနာပြည်မှည့်လို့ ပေါက်စေခဲ့တယ် ပြည်ပိုးပြည်ပုတ်တွေမရွံမရှာ မြိုချတယ်လို့ ပြောလဲပြောရော။ ဗျာ..ဆိုပြီး ဖခမည်းတော်ကြီးကိုသတိရစေသည်။ မိဘမေတ္တာကို အောက်မေ့လာခဲ့သည်။ ဟဲ့.မင်းကြီးများ ဖခမည်းတော်မင်းကြီးအား ထောင်တွင်း အကျဉ်းခံဘ၀မှ လွတ်ပေးစေလို့လဲ ပြောလိုက်ရော ကျန်တဲ့အမတ်တယောက်ရဲ့စာက မှန်လှပါဘုရား ဆိုပြီး ဖခမည်းတော်ကြီးနတ်ရွာစံ ကံတော်ကုန်ပါပြီဘုရားလို့ စာတဆောင်ဆက်သတော်မူတော့ နောင်တတွေ တပွေ့တပိုက်ကြီးသူရလိုက်သည်။ ခေါ်လိုက်ပါပြီ အရှင်ဒေ၀ဒတ်ကို လောဟကုမ္ဗီငရဲက ဒီနေ့ထိပေါ့။ အင်္ဂုလိမာလကြပြန်တော့ လူကောင်းလူတော်တယောက် သို့သော် ဂုန်းတိုက်ခံခဲ့ရှာ၏။ လက်ညှိုးပေါင်း၁၀၀၀ ရှာကြံခိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့သူ့ဆရာက။ တွေ့သမျှ လူကို သတ်ခဲ့သည် လူဆိုးလူမိုက်ဘ၀ရောက်ရှိလာခဲ့တော့သည်။လူမြင်သမျှက နှလုံးအော့အံလောက်အောင် မုန်းတီးစေခဲ့သည်။ ဒီနေ့ ဒီရက် လက်ညှိုးပေါင်း တထောင်ပြည့်တော့မည် ၉၉၉ ချောင်း ဘယ်သူလာလာသတ်မည်ဟု စိတ်ထဲတွင်ကြုံးဝါးလျှက်။ တိုင်းသူပြည်သားတို့သည်လည်း အင်္ဂုလိမာလ ရန်မှရှောင်ကြရသည်။ တိုင်းပြည်မှ ကြော်ငြာမောင်းခတ်ထားသည် တွေ့တဲ့နေရာ သတ်စေ ဆိုသော အမိန့်။ ထိုစကားကိုကြားလိုက်သည်က သူ၏အမေ တောင်ဝှေးကိုလက်မှာကိုင်ပြီးတောထဲသို့ ထွက်အရှာ။သားအပေါ်ချစ်တဲ့ မိဘ၏မေတ္တာ။မြတ်စွာဘုရားသည်လည်းသတ္တ၀ါတွေအပေါ်ကျွတ်ထိုက်သူ/ထိုက်ချိန် ကို ဥာဏ်တော်ဖြင့် ဆင်ခြင်နေပြီ။ တကယ်လို့ ငါမကယ်ရင် မာတုဃာတကကံ ထိုက်ပေတော့မည် ဟု တွေးရင်း မြတ်စွာဘုရားလည်းတောထဲထွက်အလာ။ အင်္ဂုလိမာလသည်လည်း မိခင်ကိုသော်မှ သတ်မည် တွေပပြီ အမေ။ မိဘရဲ့ ကရုဏာအသံ။ သားရေ လူလေးဆိုပြီးအော်ခေါ်သည်။တချောင်းထဲသာ လိုသောလက်ညှိုးသည် ဒီနေ့အမေ့လက်ပဲ.ဟုတွေးပြီးအမေဆီသို့ လိုက်။မဟာကရုဏာရှင်မြတ်စွာဘုရားသည် ကြားမှ ၀င်ပြီးဟန့်တား။ ဒီတော့ အင်္ဂုလိမာလ တယောက်မိဘထက် ရဟန်းဂေါတမကိုမြင်သည် ရဟန်းဂေါတမနောက်လိုက်သည် အရှင်ရဟန်းကြီးမပြေးလင့်..ဆိုသည်။ ချစ်သား ငါကားမပြေး သင်သည်သာ ပြေးနေသည်သာတည်းဟု တရားဓမ္မဟောကြားလို့ ကျွတ်ခဲ့ရသည်။ လူတွေအပေါ်မကောင်းကျိုးများစွာပေးခဲ့သည့် လူမိုက် အင်္ဂုလိမာလ။ရဟန်းဘ၀ရောက်သည်။အိမ်စဉ်အတိုင်းလှည့်လည်ဆွမ်းရပ်သည် ဆွမ်းမပြောနဲ့တွေ့သမျှလူတို့က ခဲတို့ဖြင့်၎င်း ဒုတ်တို့ဖြင့်၎င်း ပစ်ပေါက်ကြ၏။ အနာတရ ဒဏ်ရာတို့သည်မြင်မကောင်းရက်။ သို့သော် သူ၏ ဘ၀သမိုင်းက မိုက်ကြွေးတွေ သူဆက်သည်။ငြိမ်ခံသည်။ နောက်မြတ်စွာဘုရားသည် အင်္ဂုလိမာလသုတ်ပရိတ်ကို ရွတ်စေသည် မိန်းမများမီးတွင်းမှာ အခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော် အင်္ဂုလိမာလပရိတ်တော်ကို ရွတ်စေခြင်းအားဖြင့် မွေးဖွားရလွယ်စေသည်။ အင်္ဂုလိမာလသည် တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ် ဆိုးသွမ်းခဲ့၏။ ဒုက္ခများစွာပေးခဲ့၏။ သို့သော် သူသည် ကောင်းကျိုးကိုလည်းပေးဆပ်ခဲ့လေပြီ။ သူသည် အကယ်၍ မြတ်စွာဘုရားနှင့်မတွေခဲ့သော် မာတုဃာတကကံ ထိုက်ပေတော့မည်။ သို့သော်.သူ၏၀ဋ်ကြွေးသူပြန်ဆက်သွားရှာ၏။ကောင်းကျိုးလဲပေးသွား၏။ အဇာတသတ်မင်းသားမှာတော့ ပိတုဃာတကကံထိုက်သွားရရှာပြီ ယနေ့ထက်တိုင် ငရဲသို့ကျခံနေရသည်သာ။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မိဘ မရှိသူ၍ မရှိပါ။ မိဘကျေးဇူးကို သက်ရှိရှိနေစဉ်ပြုစုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တတ်ပါစေ။ တလောက အင်တာနက်စာမျက်နှာက တွေ့လိုက်ရသည့် ဗွီဒီယိုကားတကား “ မရင်ရွှေ” တဲ့ မိဘကိုပစ်မှားသည် စော်ကားသည် ပါးရိုက်သည်။မိခင်အရာတွင်နေသော ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ကြီးမှာတော့ သမီးမိုက်မရင်ရွှေ အတွက် နေ့တိုင်းမျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်။ဖြောင်းဖျပြောဆိုသည် ဆိုးသွမ်းမြဲဆိုးသွမ်းလျှက် တနေ့ ဒေါသပေါက်ကွဲရင်း မိခင်ကို စော်ကားပြီးပါးရိုက်ခဲ့သည်။ တောသို့ထွက်ပြေးခဲ့သည် မဟာပထ၀ီမြေကြီးသည် ကွဲအပ်လျှက် မရင်ရွှေ ကို မြေကြီထဲသို့အရှင်လတ်လတ်မြေမြိုပစ်ခဲ့သည်။ ယ္ခု.ခေတ် ဗွီဒီယိုတွေ ခေတ်စားနေသည် ဒါရိုက်တာကြီးများလည်း ဒီလိုကားမျိုးတွေများများရိုက်ခြင်းဖြင့် လူငယ်တွေ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန် ပညာပေးကားများ မိဘမေတ္တာ မိဘကျေးဇူးကားများရိုက်ခြင်းဖြင့် လူသားတိုင်းအပေါ်မှာ ပညာပေးနိုင်ကြပါစေ လို့။ ဒီ post လေးကို ဖတ်မိသူတိုင်း မိဘမေတ္တာကို နားလည်စွာ အသိတရားများရင့်ကျတ်ပြီး ယောသိသောမနသိကာရ စိတ်လေးများဖြင့်မိဘတိုင်းအပေါ်မှာ ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်သော သားသမီးရတနာများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ လို့ ရည်သန်လျှက်။။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 12:27 PM